पूर्व सांसद डा. शंकरप्रसाद उप्रेतीको निधन, देउवाद्वारा श्रद्धाञ्जली « प्रशासन
पूर्व सांसद डा. शंकरप्रसाद उप्रेतीको निधन, देउवाद्वारा श्रद्धाञ्जली
प्रकाशित मिति : 28 February, 2021 1:34 pm
काठमाडौँ। समाजसेवी तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य डाक्टर शंकरप्रसाद उप्रेतीको ८८ वर्षको उमेरमा आइतबार निधन भएको छ । डा. उप्रेतिको निधनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका उप्रेतीले चिकित्सकका रुपमा विसं २०१८ मा कैलालीको धनगढीबाट सेवा शुरु गरेर पछि भोजपुर हुँदै झापाको शनिश्चरेमा आफ्नै घरमा क्लिनिक स्थापना गरी करीब ५० वर्ष चिकित्सा सेवा गरेका थिए । आर्थिक रुपले सामान्य स्थितिमा रहेका जोकोही नागरिकले उनबाट निःशुल्क उपचार पाउने गरेका थिए ।
विसं २०४६ को परिवर्तनपछि कांग्रेसका तर्फबाट छ वर्षसम्म राष्ट्रियसभाका सदस्य रहेका उप्रेतीले पञ्चायत विरोधी आन्दोलनका क्रममा पटकपटक कारागार भोग्नुपरेको थियो ।
भारतबाट एमबीबीएस सकाएर १० वर्ष सरकारी सेवामा काम गरेका डा। उप्रेतीले थप ४० वर्ष झापाको शनिश्चरेमा बसोबास गरी त्यस क्षेत्रका बिरामीहरुको निःशुल्क उपचार गरेका थिए ।
झापा र आसपासका जिल्लामा ‘डाक्टर बा’ नामले चिनिएका उप्रेतीले निःस्वार्थ जनताको सेवा गरेका थिए । पछिल्ला केही वर्षदेखि अस्वस्थ भएपछि उनी छोरा डा. सञ्जीव उप्रेतीसँग काठमाडौँमा बस्दै आएका थिए ।
डा.उप्रेतीको निधनमा राजनीतिककर्मीका साथै साहित्यकार र नागरिकहरूले पनि शोक व्यक्त गरेका छन् । सभापति देउवाले आज शोक विज्ञप्तिमार्फत उनको निधनबाट आफूले एक पुरानो साथी, पार्टीले एक निष्ठावान् अग्रज र समाजले अथक समाजसेवी गुमाएको जनाएका छन्। सभापति देउवाले उनीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेका छन् ।
Tags : डाक्टर शंकरप्रसाद उप्रेती शेर बहादुर देउवा श्रद्धाञ्जली